Manicure ho an'ny taona vaovao 2017
Raha mino ireo famantarana ianao, ny Taom-baovao amin'ny taona 2017 dia hahomby raha mifanena aminy manodidina ny zavatra mamirapiratra mamirapiratra ny fitiavan-tanany - ny Fire Red Rooster. Ankoatra ny famolavolana ny trano, tokony hanahy momba ny hatsikana tsara tarehy ianao, ny volo mifanaraka amin'izany, ny tarehimarika ary, mazava ho azy, ny manikika izay mameno ny sary. Fanamboaran-damba tsara tarehy ho an'ny Taombaovao 2017 ny hoho dia hahagaga amin'ny sary manjavozavo maro, endriky ny fitaovana sy ny fandrosoana. Saingy tsy tokony hanohitra ny fomba, ny endrika ary ny loko amin'ny fironana haingana indrindra amin'ny indostria. Andao hiezahantsika hamantatra ny karazana manipika hanaovana ny Taom-baovao 2017, mba hanomezana izany fepetra izany.
Anatin'ireo fironana rehetra amin'ny endrika fanorenana famantarana ny fanalahidy dia misy foana ny toerana. Ny loko manikira malaza indrindra amin'ny Taom-baovao 2017 dia manondro ny palette mena. Io loko io dia ahafahan'ny vehivavy mijery tarehimarika tsy miankina amin'ny endriky ny fantsika, akanjo sy ny taona. Ny manikina maitso ho an'ny Taombaovao 2017 dia ahitana ny felany toy ny jaky, burgundy, volomparasy, mena ary hatramin'ny biriky. Saingy tsy tokony hohadinointsika fa amin'ny 2017, ny lamaody dia mifanaraka amin'ny loko fanala sy ny lipstick. Raha toa ka nijanona teo amin'ny menika mena ilay safidy dia tokony ho mena ihany koa ny molotra!
Aza mihantona amin'ny mena mena, izay, amin'ny ankapobeny, dia tena voafaritra tsara. Ny Fire Rooster dia hitondra tsara kokoa ireo loko mamirapiratra izay mameno tsara ny sarin'ny fety. Ny mariky ny taona dia tsy misy mason-tsivana mavitrika, marevaka, loko, fa koa gamma, manondro fahatsapana ny fomba, ny fahaizana mankamamy ny fahamendrehana. Mba tsy handrodana azy amin'ny famirapiratana, tsy ilaina ny manamboatra menaka, izay misy loko maitso maitso maitso. Inona no loko nofinidy, manikina ny taona vaovao 2017 dia tokony ho mendrika! Saingy ny endritsoratra biby , izay ao anatin'ny androany, amin'ny Taombaovao dia tokony holazaina hoe "tsia", satria mampidi-doza ny fianakavian'ny cat ho an'ny rooster.
Ny sary sy ny modelin'ny Taom-baovao
Sarotra ny miady hevitra amin'ny hoe tsy ara-dalàna ny akanjo maotina indrindra amin'ny taona vaovao 2017. Mazava ho azy fa tsy manaitra ny endriny izy, saingy tsy ampy ny hamamin'ny jirobe. Ho fankalazana ny iray amin'ireo fialantsasatra mahafinaritra indrindra, tsara kokoa ny misafidy nofin-tarehy tany am-boalohany miaraka amin'ny sary. Ny vahaolana nagging dia ny fanaovana sarin'akoho iray na iray amin'ny fantsika rehetra. Tsy ny tompony rehetra no afaka manintona ity vorona ity. Hisy mpanamboatra glue manokana ho tonga amin'ny famonjena. Azo atao any an-trano ity manikika ity. Ilaina ny hampiasa lakolosy misy ravin-doko, manafana ny tsipika ary manaloka ny plastika amin'ny lacquer-fixer. Ankoatra izany, tsy ilaina ny maneho ny cockerel manontolo. Tarehimarika sy tonon-teny malefaka amin'ny endriky ny volom-borona, paompy manana hady, rambony mamirapiratra.
Tsy ny ankizivavy no tia an'ireny fanandramana ireny. Ny endriky ny endriky ny Santa Claus, ny ravinkazo, ny hazo krismasy, kintana, izay nampiasaina tamin'ny fomba nentim-paharazana nandritra ny fialantsasatry ny taom-baovao, dia mifanentana tsara amin'ny lohahevitry ny manika.
Tapa-kevitra ny hanao fanatanjahan-tena amin'ny fikarakarana fety, aza hadino ny mahasoa. Ny voankazo mahazatra dia hikorontana mandritra ny andro vitsivitsy. Koa satria ny fialantsasatry ny Taom-baovao dia latsaky ny roa herinandro latsaka, dia mahatsapa ny tsy hanaovana manikira nentim-paharazana, fa ny handrakotra ny fantsika amin'ny loko varahina. Voalohany indrindra, ity loko ity dia manitatra ny fahafahan'ireo lanl-design, ary faharoa, tsy mila fanavaozana sy fanitsiana mandritra ny roa na telo herinandro.
Akanjo volom-borona 2015
Bags - Lohataona 2014
Beautiful manikika 2017 - fifantenana ireo hevitra tena mahaliana
Massimo Dutti Lohataona-Summer 2013
Akanjo lava lava amin'ny fararano 2015
Epilepsy amin'ny alika - soritr'aretina
Confiture - recipe
Harvard mpianatra antsoina hoe Ryan Reynolds "ilay lehilahy tamin'ny taona"
Ahoana no hankalaza ny 14 Febroary amin'ny vadiny?
Pizza tsy misy koba
Tea Tree Oil - fampiharana
Ny valifaty vehivavy dia mampidi-doza sy mahatsiravina: 25 "mamaly" an'ireo mpamadika!
Fanairana ny volon'olombelona
Aiza ny Tendrombohitra Everest?
Rasalama ho an'ny fatiantoka
Andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina
Marimera ho an'ny zaza vao teraka
Asehoy amin'ny ankizy ao amin'ny bal ireo mpianatra 4 taona
Ny sakafo tsara indrindra
Ronnie Wood, 69 taona, no niteraka zazavavy kely roa